Article submitted by: Thunderbolts on 5-Nov-2013
ဗမာပြည် တိုးတက်မှု ငြိမ်းချမ်းရေး (၂ )
မျိုးချစ် တိုင်းချစ် ပြည်ချစ်တို.၊
ဆက်ပြောရမယိ ဆိုရင် မြန်မာဆိုတာ ဘယ်သူတွေလဲ ၊ ၁၉၈၈ ခုက ထွက် လာတဲ့ ဒုတ်ထမ်း ဒါထမ်း မြန်မာ တွေဟာ ကုလားဒိန်တွေ လို.မြင်ရတယ် ။ ဖြစ်တာကတော ဖြစ်ခဲ့ပြီ ။ အကောင်းဖက်ကကြည်.မလား အဆိုး ဖက်က ကြည့်မလား ။ ကိုယ်က ကောင်းတယ်ဆိုရင် ကောင်းမှာဘဲ၊ ကိုယ်ကဆိုး တယ် ဆိုရင် ဆိုးမှာဘဲ ၊
မှန်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကရင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ဘို. ၁၁၂ ရက်သာ လိုတော့ တယ် ဆိုတာ။ KNLA , Karen National Liberation Army ကရင် လက် နက် ကိုင် တပ်ဟာ ကရင်လူမျိုးစု ကိုသာ ကိုယ်စားပြုတဲ့ တပ်ဖြစ် တယ် ၊တခြား လူမျိုးစုတပ်တွေဆိုတာကလဲ ရှီသေးတယ်၊ သူတို.လူမျိုး ကိုသာ ကိုယ်စားပြုကြလိမ့်မယ်၊ ဗမာဆိုရင် အသေသတ်ခဲ့ကြတာဘဲ ။
မြန်မာ့ တပ်မတော်ကတော့ ကျားမ မရွေး လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး မြန်မာ နိုင်ငံ သားအားလုံး မြန်မာတနိုင်ငံလူံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ သစ္စရှိ လူမျိုးစုဝင် တွေ အားလုံးပါဝင်တဲ့ ပြည်သူ.တပ်မတော်သာဖြစ်တယ် ဆိုတာ အားလုံး ခွဲခြားသိဘို. လိုတယ် ။
စကားအရာ ပြောရမယ်သာ ဆိုရင် ဗမာနိုင်ငံတော် ပျောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ တော် ပြန်ပေါ်လာရတာ ဗမာတွေ တဘန်းရှုံး တာဘဲ ဒါပေမဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် နိုင်ငံရေး မှန်ကန်မှု အတွက် ဗမာလူမျိုးမပျောက်ဘဲ မြန်မာ နိုင်ငံ ပြန်ပေါ်ပေါက်လာရတာကို အကြောင်းအကျိုး အရ လက်ခံ တယ် ။
အမှန်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ အပိုင်း က ကရင် ဗိုလ်ချုပ် စမစ်ဒွန်း ၊ ဗိုလ်ချုပ် စော ကြာဒိုး တိုကို ဗမာ့တပ်မတော် ရဲ့ ဦးစီးတွေ ခန်.ခဲ့တာဟာ ပြည်ထောင်စုသား
တို.စည်ူလူံးညီညွတ်ရေး ပေါင်းစည်းရေး ရည်ရွယ်ပေမဲ့၊ ကုရင် တွေဟာ ဗမာမုန်းတီးရေးစိတ်နဲ့ တောခို သွားကြတာကိုကြည့်ရင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတာ ဟာ ဒုတ်ထမ်း ဒါထမ်း သေနတ်ထမ်းနဲ့ အိပ်ကောင်းခြင်း မအိပ်ရ စားကောင်း ခြင်း မစား ရတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဘဲ ဖြစ်လိမ့်.အုံးမယ် ဆိုတာ ဗမာတွေ သတိမ လွတ်စေခြင်ဘူး။ စမစ်ဒွန်းနဲ့ ကြာဒိုးတိုယ လက် ချက် ပါ မပါ ကိုတော့ မပြောနိုင်ဘူး ။
တနည်းအားဖြင် တွေး ကြည်ြ့ကစမ်းပါ ၊ ဗမာပြည်ဆိုတာ ပျောက်ခဲ့ပါပြီ ။ ဗမာလူမျိုးလဲ တဖြေးဖြေး မျိုးတုန်း ဇါတ် တုန်း တော့မယ် ၊ ဗမာဆိုတာကို အရုပ်စွဲပြရမဲ့ အချိန် နီးလာပြီ လား။ ဒါ ဟာ ခေတ်မီ တိုးတက် ဖွံ.ဖြိုး တဲ့ နိုင်ငံတော် ဖြစ်ဘို. အရင်းအနှီးတွေလို. မှတ်ယူ ရမလား ?
အခြားလူမျိုးစုတွေ ကရော ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ဘာတွေ ရင်းနှီးကြမှာ လဲ သူတို.ရော မြန်မာဖြစ်ဘို.အသင့် ရှိကြ ပြီလား မေးပါရစေ ။
တော် သေး ပြီ ။